mishiino Label ee
Goynta & laabi Machine
RFID & EAS Line Label
dhar cidhiidhi Makiinado
Mishiino hor jare
Mashiinka tolida & tidcan
dayactir for yari irbad
Texeen accesssories gooynayaa
Picanol GAMMAX, GAMMAFF2005, OPTIMAX GRIPEPRS iyo accessories
grippers ITEMA R9500
grippers Dornier iyo jaraya
Somet grippers Vamatex iyo accessories
Smit gooynayaa Gripeprs Oo Accessories
Gano gooynayaa accessories iyo qaybo ka mid
Airjet Waterjet gooynayaa qaybo
Adeegyada & warranty
CO TECHFULL Sino., LTD.
waa shirkad sumcad xarunteeduna tahay magaalada Shiinaha oo ku hawllan yahay hawlaha ganacsi ee soo socda:
Macaamiisha 'qeybiyaha lamaanahaaga of dayactir iyo accessories for yari, iyo mashiinada Dobby iyo Jacquard.
Sida adeeg bixiyaha xirfad iyo khibrad leh, TECHFULLwaxaa ka go'an in bixiya mashiinada functional waayo, dhar cidhiidhi ah, gaar ahaan wax khariban farsamo.
Oo ay taageerayaan line-soo-saarka gaar ah iyo talanti sare xirfad leh, TECHFULL shaqeeya on bixinta mishiinada tayo leh marsami calaamad iyo sumadaha dhamaadka macaamiisha adduunka oo dhan.
Tan iyo 1998
TECHFULL h sida bilaabay in ay dhirta wax soo saarka gaar u astaysto iyo bixiyo dayactir sida tayada-kalsooni iyo kharash-ool ah beddel u ah macaamiisha ay orodka yari shaqeeyaan.
Tan iyo sannadkii 2002
Iyada oo ku saleysan khibradda wax soo saarka qaybaha oo waxgarashada yari, TECHFULL ayaa bilowdey in wada bixiya mashiinada xal ee wax soo saarka ah oo dhar cidhiidhi iyo sumadaha dhar.
Waxaan ku jirtay oo la joogto ah samaynta doonta dadaalka joogto ah si ay ugu deeqdo alaabta tayo sare leh oo qiimaha tartan rasmi ah si ay macaamiisha our xurmayn!
Waxaan isku dayaan in ay gaaraan qancinta macaamiisha in ay lammaanahooda muddo dheer iyada oo loo marayo samaynta xal loogu casriyeeyo xarumaha wax soo saarka iyo qurbaankiisa la isku halayn karo beddeli qayb firaaqada.
l ocated magaalada ugu weyn ee dhoofinta xuduud Shiinaha on Hong Kong where we can closely follow up the trends in the international market and give the fastest response to the requests of our customers.
Location: Nanshan, Shenzhen, Shiinaha
Dhaqdhaqaaqa: marketing Overseas iyo iibka caalamka
Location: Songhu Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, Shiinaha
Productions: Grippers iyo qaybo, waayo, yari
Location: Gaobu Degmada Warshadaha, Dongguan, Shiinaha
Productions: Machines waayo, dhar cidhiidhi ah
Location: Longhua Degmada Warshadaha, Shenzhen, Shiinaha
Productions: Machines for sumadaha.
Hawlaha Horumarinta ee muhiimka ah ee taariikhda shirkadda
Tan iyo 2001 TECHFULL ayaa ka qayb edition kasta oo ITMA Aasiya and ITMA EUROPE.
Jawaab-celinta ka macaamiisha
In iskaashi iskaashi la macaamiisha ku yaal in ka badan 40 dal, TECHFULL ayaa helay aqoonsi oo xushmad sare ee uu adeegyada la isku halayn karo iyo wax soo saarka oo tayo leh ku bixiyeen.
Ma waxaad raadineysaa khayraadka roon dayactir si aad tartan?
Ma waxaad raadineysaa mashiinada qaaska ah si wax loogu qabto baahida aad codsi gaar ah?
Waxaan idin siin doonaa xal ah!
Phone: + 0086 (0) 755 2653 Sanadkii 1568kii,
U dir shuruudaha aad hadda
Label Finishing Machines, Goynta Oo Rolling Machine , Xiinka Jarida Label & laabi Machine , dayactir & Accessories Waayo gano yari , Spare Parts For G6100, G6200, G6300, G6500, F2001, Grippers gano Waayo Sulzer yari,